Eyona ndlela yokuthenga i-Bitcoin ngeKhadi letyala nge-Meyi ka-2022 -Funda nge-2 yoRhwebo
Indlela yokuthenga i-Bitcoin ngeKhadi letyala - Funda isiKhokelo soRhwebo sesi-2 ngo-2022
ukuthenga Bitcoin ngekhadi lokuthenga ngetyala elivela kwintuthuzelo yekhaya lakho akuzange kube lula. Ayiphelelanga nje ekubeni i-intanethi izaliswe ngabathengisi abakwi-intanethi abalawulwa ngamaqumrhu aphambili afana ne FCA - kodwa ungatyala imali ngeendlela ezininzi zokuhlawula imihla ngemihla.
Ngokunjalo, ukuba ujonge ukuthenga iBitcoin ngekhadi letyala - usethamsanqa. Ngale nto ithethwayo, ayingabo bonke abarhwebi abakwi-intanethi ekufuneka bathathelwe ingqalelo. Umzekelo, nangona benokuba nelayisenisi efunekayo yokwamkela iintlawulo zekhadi letyala kubahlali base-UK, imirhumo esisiseko inokwenza ukuthenga kubize kakhulu.
Ke ngoko, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu esinzulu. Asikucaciseli nje eyona ndlela ilula yokuthenga i-Bitcoin ngekhadi letyala, kodwa sikwabonisa abona barhwebi be-intanethi abangcono kakhulu ukwenza oku.
Phawula: Nangona umthengisi wakho omkhethileyo esenokungakuhlawulisi mali yokuthenga i-Bitcoin ngekhadi letyala, umniki-tyala unakho. Ukuba bayakwenza oko, oku kungenxa yokuba umnikezeli wekhadi letyala uyijonga intengiselwano njengemali ehlawulwa kwangaphambili.
Thenga i-Bitcoin ngeKhadi letyala kwiMizuzu emi-5
Awunalo ixesha lokufunda isikhokelo esinzulu ngokupheleleyo? Ukuba kunjalo, landela amanyathelo okhawulezileyo omlilo achazwe apha ngezantsi ukuthenga iBitcoin ngekhadi letyala ngoku.
Inyathelo 1: Vula iakhawunti ngexabiso lethu eliphezulu Umthengisi weBitcoin -I-Crypto Rocket.
Inyathelo 2: Layisha ikopi yesazisi sakho ukuze uqinisekise ubuwena.
Inyathelo 3: Faka iinkcukacha zekhadi letyala kunye nemali yediphozithi.
Inyathelo 4: Faka iodolo 'yokuthenga' ukuze uthenge iBitcoin.
Inyathelo 5: Bambelela kwiBitcoin yakho de ube ukulungele ukuthengisa.
Ukuthenga i-Bitcoin ngeKhadi letyala-iZiseko
Ukuba ufuna ukuthenga iBitcoin ngekhadi letyala, kuya kufuneka usebenzise umrhwebi okwi-Intanethi. La ngamaqonga omntu wesithathu akuvumela ukuba utyale imali kuluhlu lweeasethi ukusuka kwintuthuzelo yakho. Ngaphezulu kwee-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin, Ethereum, kunye neRipple - oku kunokubandakanya izitokhwe zemveli kunye nezabelo, Iimpahla, yaye indices. Nangona kunjalo, nokuba yeyiphi na i-broker ogqiba ukuyisebenzisa, inkqubo ihlala ifana kakhulu.
Umzekelo, kuya kufuneka uqale uvule iakhawunti. Oku kufuna ulwazi lobuqu olusisiseko kwaye kunqabile ukuba kuthathe ngaphezulu kwemizuzu embalwa ukugqiba. Okulandelayo, kuya kufuneka uqinisekise isazisi sakho. Uninzi lwabathengisi bayakuvumela ukuba wenze oku ngokuzenzekelayo ngokufaka ikopi yencwadana yakho yokundwendwela okanye ilayisenisi yokuqhuba. Ngoko ke, akukho mfuneko yokuba ulinde iintsuku ekupheleni ukuze iofisi yokuthotyelwa komntu iphonononge amaxwebhu akho.
Nje ukuba usete, uya kuthi emva koko ubeke imali. Ukuba umthengisi weBitcoin ekulo mbuzo uxhasa intlawulo yekhadi letyala, oku kuya kubandakanya iVisa kunye neMasterCard. Ngokwentlawulo, oku kuya kwahluka ngokuxhomekeke kumrhwebi oyisebenzisayo. Umzekelo, amaqonga athandwayo afana neCoinbase ahlawulisa i-hefty 3.99% kwintlawulo yekhadi letyala. Oku kwahluke ngokupheleleyo kwizinto ezithandwa yi-eToro - ezingabizi zifizi ngayo nayiphi na imali.
Xa idiphozithi yekhadi lakho lokuthenga ngetyala yongezwe kwi-akhawunti yakho ye-brokerage-edla ngokuba ngoko nangoko, ungathenga i-Bitcoin ngokucofa iqhosha. Kwiimeko ezininzi, kufuneka nje ufake isixa seBitcoin onqwenela ukusithenga ngeeponti kunye nepence kwaye uqinisekise iodolo. Ukuba usebenzisa i-broker elawulwayo, ungagcina iingqekembe zakho eqongeni de ube ukulungele ukuthengisa.
Iinkonzo kunye neengozi zokusebenzisa iKhadi letyala ukuthenga iBitcoin
Iintlawulo zekhadi letyala zongezwa kwi-akhawunti yakho ye-brokerage ngoko nangoko.
Iibroker zihlala zixhasa iVisa kunye ne-MasterCard.
Awona maqonga angcono awahlawulisi nayiphi na imali yokusebenzisa ikhadi letyala.
Abathengisi beBitcoin kufuneka balawulwe ukuba banqwenela ukwamkela iintlawulo zekhadi letyala.
Emva kokuba wenze imali kutyalo-mali lwakho, rhoxisa umva kwakwelo khadi letyala.
Iimfumba zeBitcoin brokers ukukhetha kuzo.
Inkqubo yotyalo-mali ekupheleni kufuneka ingabi ngaphezu kwemizuzu eyi-10-15.
Imida ibakhona xa usebenzisa ikhadi letyala.
Abarhwebi abalawulwayo baya kufuna ukuba baqinisekise ukuba ungubani.
Inkxaso yamakhadi etyala e-AMEX inqabile.
Imirhumo yokuthenga iBitcoin ngeKhadi letyala
Kwelinye icala, ukuthenga iBitcoin ngekhadi letyala kulunge kakhulu. Ngapha koko, uyakuxhamla kwinkqubo yokurhoxa engenamthungo xa kufikwa kumba wokufumana imali kwiBitcoin yakho. Nangona kunjalo, kukho inani lemirhumo ekufuneka ulithathele ingqalelo ngaphambi kokuba ungene. Oku akubandakanyi kuphela iifizi ezithile zentlawulo, kodwa iifizi zokurhweba nazo.
Kananjalo, qiniseka ukuba uphonononge oku kulandelayo ngaphambi kokusebenzisa ikhadi lokuthenga ngetyala ukuthenga iBitcoin.
Fe Intlawulo yedipozithi
Abanye, kodwa ayingabo bonke, Abarhwebi beBitcoin baya kukuhlawulisa umrhumo wedipozithi yokusebenzisa ikhadi lekhredithi. Ukuba bayakwenza, oku kuyakuza ngohlobo lwemali eguquguqukayo. Ngamanye amagama, kokukhona oyifaka kakhulu imali, kulindeleke ngakumbi ukuba uhlawule.
Omnye umrhwebi, ngokukodwa, owaziwayo ngokubiza imali ephezulu yediphozithi yileyo yeCoinbase. Njengoko kuphawuliwe ngasentla, iqonga liya kukuhlawulisa i-3.99% yokusebenzisa ikhadi letyala xa uthenga i-Bitcoin.
Masithi ufuna ukuthenga i-£2,000 yexabiso leBitcoin eCoinbase.
Ufuna ukusebenzisa ikhadi lakho letyala leVisa, ke kufuneka uhlawule i-3,99%.
Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uhlawule i-£ 79.80 kwimirhumo.
Ngokunjalo, uya kufumana kuphela i-£1,922 yexabiso leBitcoin nangona ikhadi lakho letyala lalihlawuliswe nge-2,000 yeedola.
Ngokusesikweni, yiyo loo nto sikhuthaza kuphela abathengisi beBitcoin abakuvumela ukuba ubeke imali simahla. Emva kwayo yonke loo nto, unokufuna ukubhatala imali nge sasaza okanye ngekhomishini yorhwebo.
F Imali yokuXhaswa kweKheshi ngaphambili
Ngokuxhomekeke kulowo ukhupha ikhadi letyala, usenokufuneka ukuba uhlawule 'imali ehlawulwa kwangaphambili'. Njengoko igama libonisa, le yintlawulo ehlawulwayo xa usebenzisa ikhadi lakho letyala ukwenza ukurhoxiswa kwe-ATM. Nangona kuyinyani ukuba awukwenzi ukurhoxiswa kwe-ATM, ezinye iinkampani zekhadi lokuthenga ngetyala ziquka ezinye iintlobo zentengiselwano kwi-cash advance threshold.
Imizekelo ibandakanya ukuhanjiswa kwemali kwi-Intanethi, iidiphozithi zokungcakaza, kunye nabarhwebi abakwi-Intanethi. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ulindele ukuhlawula kwingingqi ye-3% yexabiso lokuthengiselana lilonke. Umzekelo, ukuthengwa kwe- £ 2,000 yeBitcoin kuya kukuxabisa nge- $ 60. Ngapha koko, ngokungafaniyo nezinye iimveliso kunye neenkonzo, inkcitho engaphambili inomdla osetyenziswayo kwangoko.
Ingcebiso yethu iya kuba kukunxibelelana nenkampani yekhadi lakho letyala kwangaphambili, ukuze uqiniseke ukuba intengiselwano ayizukufumana mali ngaphambili.
Commission IKomishini yoRhwebo
Ngaphezulu kwemirhumo yedipozithi kunye nokuhamba phambili kwemali, kuya kufuneka uphinde uphonononge ukuba ngaba umthengisi wakho omkhethileyo uhlawulisa ikhomishini yorhwebo. Ukuphinda usebenzise iCoinbase njengomzekelo wethu ophambili, umrhwebi ubiza i-1.5% ngalo lonke ixesha uthenga kwaye uthengisa iBitcoin. Xa kuthengwa i- $ 2,000, oku kuya kufikelela kwi- £ 30. Oku kuya kuthi emva koko kuthathwe ekuthengeni kwakho, kukushiye nge- £ 1,970.
Uya kucelwa ukuba uhlawule i-1.5% xa usiya kufikelela kutyalo-mali lwakho lweBitcoin. Umzekelo, ukuba uthengise i-Bitcoin xa iphothifoliyo yakho yayixabisa i- $ 4,000, kuya kufuneka uhlawule i- $ 60.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abanye abathengisi abakwi-Intanethi bayakuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iBItcoin ngaphandle kwekhomishini. Ngapha koko, uninzi lwabarhwebi esiye sabacebisa kweli phepha benza nje oko. Kananjalo, ume ukunciphisa iindleko zakho zokurhweba ngomgama othile.
Imali yokugqibela ekufuneka uyijongile kukusasazeka. Lo ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' leBitcoin, kunye nexabiso 'lokuthengisa'. Xa ubala umahluko ngokweepesenti ngokwemiqathango, eli lixa elihlawula ngokungangqalanga ukubeka urhwebo lwakho.
Ixabiso 'lokwenyani' kwimarike yeBitcoin yi-£10,000.
Umthengisi unikezela ngexabiso 'lokuthenga' le-£9,900.
Ixabiso 'lokuthengisa' lifikelela kwi-£10,100.
Umahluko phakathi kwamaxabiso amabini ngokuchasene nexabiso lemarike yi-£ 100.
Oku kufikelela kwi-1%, oku kuthetha ukuba ukusasazeka yi-1%.
Ke, ukuba ubuza kuthenga i-Bitcoin, kuya kufuneka wenze ubuncinci i-1% kwinzuzo ukuze nje uphule. Ngamanye amagama, ukuba uthenge iBitcoin emva koko wayithengisa kwangoko, uya kuyenza ilahleko ye-1%. Kananjalo, kokukhona ukusasazeka kokuphakama, kokukhona kubiza iindleko zakho ngokungathanga ngqo.
Kungenxa yoko le nto sikhuthaza kuphela abathengisi ababonelela ngokusasazeka okuqinileyo.
Ukurhoxisa utyalomali lwakho lweBitcoin
Nangona ukuza kuthi ga ngoku sijolise kwisikhokelo sethu kwinkqubo yokuthenga, kuya kufuneka ukuba uthathele ingqalelo malunga nokonga utyalo-mali lwakho. Emva kwayo yonke loo nto, sicinga ukuba uthenga iBitcoin kuba ucinga ukuba iyonyuka ngexabiso ekuhambeni kwexesha.
Ukukhululeka apho unokukwenza oku ngekhadi lakho letyala ekugqibeleni kuya kuxhomekeka kuhlobo lomthengisi olisebenzisayo, kunye nendlela oceba ngayo ukugcina iingqekembe zakho zemali. Umzekelo, ukuba usebenzisa i-broker elawulwayo njenge-eToro, akukho mfuneko yokurhoxisa utyalomali lwakho. Kungenxa yokuba iqonga linezolawulo olufunekayo lokugcina imali yakho ikhuselekile.
Kwesinye isiphelo sesibuko, ukuba usebenzisa umrhwebi ongalawulwayo-esingakucebisa ngamandla ngokuchasene nawo, uya kuba ulungile ukukhupha iingqekembe zakho kwisipaji sangasese. Oku akuthethi nje ukuba unoxanduva lokugcina utyalo-mali lwakho lukhuselekile, kodwa uyakufumanisa ukuba inkqubo yokurhoxa inzima kakhulu.
Umzekelo, inkqubo yokuphela kokugqibela ibandakanya:
Ukuthenga i-Bitcoin ngekhadi lakho letyala.
Ukurhoxisa i-Bitcoin kwi-wallet yangasese.
Ukugcina i-Bitcoin yakho igcinwe kwi-wallet de ube ukulungele ukuthengisa.
Xa ulungele ukuthengisa, kufuneka uthumele iingqekembe kwi-broker ye-intanethi.
Emva koko kufuneka utshintshe i-Bitcoin ngeeponti.
Emva koko kufuneka uhoxise iingqekembe kwi-akhawunti yebhanki - ngokwemigaqo echasene nokuthengiswa kwemali.
Oku kwahluke ngokupheleleyo ekusebenziseni i-broker elawulwayo njenge-eToro. Umzekelo, nje ukuba uthenge i-Bitcoin yakho, ungayishiya kwi-broker de ube ukulungele ukuthengisa. Xa ukhona, unokuyitshintshela kwimali ye-fiat ngonqakrazo lweqhosha.
Okokugqibela, kuya kufuneka ucele ukurhoxa ubuyele kwikhadi elinye lekhredithi obukade wenza ngalo idipozithi. Unokwenza oku kuba sele uwusebenzisile umthombo wemali kwi-broker, ke yonke into iphakathi kwemithetho yase-UK yokulwa imali ngokungekho semthethweni!
Ukukhetha uMthengisi ukuze athenge iBitcoin ngeKhadi letyala
Ke ngoku ekubeni sigubungele izinto ezibalulekileyo ezinje ngedipozithi, ukurhoxiswa kwemali, kunye neefizi- ngoku siza kuthetha nge-ins kunye nokuphuma kokukhetha umrhwebi. Emva kwayo yonke loo nto, baninzi abathengisi beBitcoin kwi-Intanethi abamkela amakhadi etyala, ke ngoko ukwazi ukuba leliphi iqonga lokukhetha elinokuba ngumceli mngeni.
Izinketho zedijithali zeQonga lokuRhweba
Kananjalo, qiniseka ukuba ufunda ezi zikhokelo zilandelayo ngaphambi kokuba ubhalise ngeqonga elitsha.
Phawula: Ukuba awunalo ixesha lokukhetha umthengisi ngokwakho, singacebisa ukuba uskrole ezantsi kweli phepha. Ngokwenza njalo, uya kufumana abathengisi bethu abaphezulu abahlanu abaphezulu be-Bitcoin bango-2022-abalawulwa kwaye bamkele amakhadi etyala.
Nangona kunjalo, singacebisa ukuphonononga ezi metriki zilandelayo ngaphambi kokwahlukana nemali yakho.
Njengoko sele siphawulile kwisikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, kuya kufuneka usebenzise kuphela umthengisi we-intanethi olawulwayo. Oku kufuneka kubandakanye amaqumrhu anikezela ngelayisenisi afana neFCA yase-UK, CySEC eSipro, kwaye ASIC eOstreliya.
Kunye nenani lolunye ukhuselo olulawulayo, oku kuyakuqinisekisa ukuba iimali zakho zigcinwe kwiiakhawunti zebhanki ezahluliweyo. Kananjalo, ukuba eyona nto yenzekileyo kwaye umrhwebi wangena phantsi, utyalomali lwakho kufanele khuseleka.
✔️ Amakhadi etyala axhasiweyo
Kuya kufuneka uqinisekise ukuba umthengisi weBitcoin omkhethileyo uyayixhasa ikhadi lakho elikhethekileyo. Kwiimeko ezininzi, abathengisi baya kuba nakho ukwamkela iVisa kunye neMasterCard. Nangona kunqabile kakhulu, abanye baya kubonelela ngenkxaso ye-AMEX. Ngale nto ithethwayo, uyacetyiswa ukuba ujonge le ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Imali, iikhomishini, kunye nokusasazeka
Sele sigubungele iifizi kwesi sikhokelo, ke kuya kufuneka uyazi ukuba ujonge ntoni. Nangona kunjalo, oku kuya kuqala ngenkqubo yedipozithi uqobo, njengoko amaqonga afana neCoinbase aya kukuhlawulisa i-3.99% kulonwabo lokusebenzisa ikhadi letyala.
Emva koko, hlola ukuba ingaba iqonga lihlawulisa ikhomishini kwiintengiso zeBitcoin. Ekugqibeleni, qiniseka ukuba ujonge ukukhuphisana kokusasazeka. Ungalibali, lo ngumahluko phakathi kokuthenga nokuthengisa ixabiso le-asethi.
Eyona ndlela ilula kakhulu yokugcina utyalo-mali lweBitcoin kukuyigcina kumthengisi okhethiweyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uphonononge okhusela iqonga kuqala. Ukuba uthenga iBitcoin ngokwesiqhelo, qiniseka ukuba umthengisi ugcina ingqekembe kwindawo yokugcina ebandayo.
Oku kuthetha ukuba i-wallet ayixhunyiwe kwi-intanethi. Ngaloo nto kuthiwa, ukuba unquma ukuthenga i-Bitcoin ngendlela ye- CFD (Ikhontrakthi-yomahluko), awudingi ukuba nexhala malunga nokugcinwa. Oku kungenxa yokuba i-asethi esisiseko ayikho, njengoko iphuma kwimali otyala kuyo.
Ngokugcina iakhawunti yakho ikhuselekile, sikhetha abarhwebi ababonelela nge2FA. Kulapho kuya kufuneka ufake i-PIN eyahlukileyo ethunyelwa kwifowuni yakho ngalo lonke ixesha unqwenela ukungena kwiakhawunti yakho yomrhwebi.
Ukuba ujonge ukuthenga nokuthengisa iBitcoin ngexesha elifutshane, unokufuna ukuqaphela umthengisi weCFD. Ngokwenza njalo, uya kujwayela kuluhlu lwezixhobo ebezinokungafumaneki kumthengisi wendabuko. Umzekelo, ii-CFDs zikuvumela ukuba ufake isicelo xa uthengisa iBitcoin.
Oku kuthetha ukuba ungathenga ngaphezulu kwe-Bitcoin kunokuba unayo kwi-akhawunti yakho. Ukuba uvela e-UK (okanye kwi-European Union) emva koko uya kubanjiswa nge-2: 1 xa uthengisa nge-imali yedatha. Amanye amaqonga abonelela ngokusebenza ngoku ngokunika amandla 'njengophindaphindayo'.
Nangona kunjalo, amaqonga e-CFD akuvumela ukuba uthengise ngokufutshane iBitcoin. Oku kuthetha ukuba uqikelela kwixabiso elizayo leBitcoin elihla.
Okokugqibela, singacebisa ukuba siphonononge isebe lenkonzo yabathengi le-Bitcoin. Oku kufuneka kubandakanya iintlobo zamajelo enkxaso anikiweyo- njengengxoxo ephilayo, umnxeba, okanye i-imeyile. Ngokufanayo, kuya kufuneka ujonge ukubona ukuba leliphi ixesha elisebenza ngalo iqela lenkxaso.
Indlela yokuthenga i-Bitcoin ngeKhadi letyala
Ukuba awuzange uthenge iBitcoin ngaphambili kwaye ufuna isikhokelo, landela inyathelo ngenyathelo lokuhamba elichazwe apha ngezantsi.
Inyathelo 1: Khetha uMrhwebi oxhasa amakhadi etyala
Okokuqala kunye nokuphambili, kufuneka ufumane iqonga le-intanethi elingathengisi kuphela i-Bitcoin kodwa ikuvumela ukuba uthenge ngekhadi lesikweletu. Ukwenza oku, landela nje izikhokelo esithethe ngazo kweli candelo lingasentla.
Ngenye indlela, ukuba awunaxesha lokuphanda iqonga kwaye endaweni yoko ufuna ukuthenga iBitcoin ngoku, skrolela ezantsi kwaye uphonononge iarhente yabarhwebi edweliswe emazantsi ephepha. Bonke abathengisi bethu abalahlekileyo balawulwa yimizimba efana nale FCA kunye neCySEC, bonke baxhasa amakhadi etyala, kwaye bonke banikezela ngemirhumo yokhuphiswano olukhulu.
Inyathelo 2: Vula iAkhawunti kwaye uLayishe i-ID ethile
Bonke abathengisi abalawulwayo baya kukucela ukuba uvule iakhawunti ngaphambi kokuba uthenge iBitcoin ngekhadi letyala. Ngokwenyani le nto ithatha imizuzu embalwa, kwaye ifuna nje ulwazi olusisiseko oluvela kuwe.
Nje ukuba uvule iakhawunti yakho yomrhwebi, kuya kufuneka emva koko uqinisekise isazisi sakho. Ngokwesiqhelo ungakwenza oku ngokufaka ikopi ecacileyo yepaspoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba.
Inyathelo lesi-3: Sebenzisa ikhadi lakho letyala kwiiNgxowa-mali zeDiphozithi
Ngoku ekubeni i-akhawunti yakho ye-brokerage ivuliwe kwaye yaqinisekiswa, ngoku ungafaka imali ethile ngekhadi letyala. Yiya kwiphepha leentlawulo, kwaye ukhethe umniki wekhadi lakho (iVisa, MasterCard, njl.).
Emva koko, faka oku kulandelayo:
Isixa kwi-GBP onqwenela ukusifaka.
Inombolo yekhadi letyala elinamanani ali-16.
Inombolo yeCVV enamanani ama-3 (ngasemva kwekhadi).
🥇 Inyathelo 4: Thenga i-Bitcoin
Kwiimeko ezininzi, iidipozithi zekhadi letyala zongezwa kwiakhawunti yakho yomrhwebi kwangoko. Kananjalo, ungaqhubeka nokuthenga kwakho iBitcoin.
Kwimeko efanayo kwezinye iimveliso ezifana igolide, isilivere, ioyile, kunye negesi yendalo - i-Bitcoin ixabisa ngokumalunga needola zaseMelika. Ngokunjalo, umthengisi wakho unokubonisa ibhalansi yeakhawunti yakho ngeUSD.
Emva kokuba ukwiphepha lokuthengisa BTC / USD, khangela ibhokisi yeodolo. Ukugqiba ukuthenga kwakho, kuya kufuneka ufake oku kulandelayo:
Bamba: Eli lixabiso leBitcoin onqwenela ukulithenga. Njengoko kuphawuliwe ngasentla, kuya kufuneka ufake oku kwi-USD.
Umda / i-odolo yentengiso: Ukuba ufuna ukuthenga i-Bitcoin ngexabiso lentengiso yangoku, khetha i-odolo 'yentengiso'. Ukuba ufuna ukungena ngexabiso elithile, tshintsha oku kwi-odolo yomda. Ngokwenza njalo, i-odolo yakho iya kuqhutywa kuphela ukuba kwaye xa ixabiso lenziwe.
oluxhathisayo: Uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi bakunika ukhetho lokusebenzisa ubungakanani. Ukuba bayakwenza, uya kuyibona idweliswe kwibhokisi yoku-odola. Oku kuya kuphawulwa njengamanani amaninzi, anje nge-2x.
Ukuyeka ukulahleka: Ukuba ufuna ukuzikhusela kwilahleko enkulu, kuya kufuneka ufake i-stop-loss order. Ngokukhankanya ixabiso, iodolo yakho iya kuvalwa ngokuzenzekelayo xa ixabiso lishukunyisiwe.
Thatha iNzuzo: Okokugqibela, ukuba ufuna ukwenza imali kwiingeniso zakho xa iBitcoin inyuka ngesixa esithile, unokusetha oku ngokusebenzisa i-odolo yenzuzo.
Nje ukuba ugcwalise iimetriki ezingentla, gcwalisa ukuthenga kwakho ngokunqakraza kwiqhosha 'lokuthenga'.
I-Broker ephezulu yokuthenga i-Bitcoin ngeKhadi leTyala
Ngaba ukulungele ukuthenga i-Bitcoin ngekhadi letyala ngoku, kodwa awunalo ixesha lokukhangela i-broker ngokwakho? Ukuba kunjalo, jonga iingcebiso zethu eziphezulu ezidweliswe ngezantsi.
Isishwankathelo, ukuthenga iBitcoin ngekhadi letyala akuzange kube lula. Kufuneka ufumane umthengisi ofanelekileyo, uvule iakhawunti, faka iinkcukacha zekhadi lakho letyala, yiyo loo nto-sele uthenge iBitcoin. Nangona kunjalo, icandelo elikhohlisayo lenkqubo kukwazi ukuba yeyiphi i-broker oza kuyisebenzisa, ubuncinci kuba zininzi izinto onokukhetha kuzo ngo-2022.
Ngale nto ithethwayo, siyathemba ukuba ngokufunda isikhokelo ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni, ngoku uyazi iimetrikhi ezininzi ekufuneka uzijongile. Oku kuya kubandakanya imirhumo yedipozithi, iikhomishini, ukusasazeka, inkxaso kubathengi, kunye nomgangatho.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, kufuneka uqiniseke ukuba umthengisi wakho omkhethileyo ulawulwa ngumzimba ofana neCAA. Ukukunceda apha endleleni, sidwelise abarhwebi beBitcoin abaphezulu abahlanu njengangoku kwimarike- zonke zamkela idiphozithi zamakhadi etyala kunye notsalo.
Ndiyithenga njani iBitcoin ngekhadi letyala?
Uya kudinga ukufumana umrhwebi okwi-Intanethi owamkela idipozithi zekhadi letyala. Nje ukuba wenze, vula iakhawunti, uqinisekise isazisi sakho, kwaye ufake iinkcukacha zekhadi lakho letyala. Ukugqibezela inkqubo, setha i-oda 'yokuthenga'.
Yeyiphi idiphozithi encinci xa usebenzisa ikhadi lekhredithi ukuthenga iBitcoin?
Uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi baya kusebenzisa isixa esincinci sedipozithi xa usebenzisa ikhadi lekhredithi, elihlala ngaphakathi kwe- $ 50- £ 150 uluhlu.
Kutheni le nto kufuneka ndifake i-ID ukuze ndithenge iBitcoin ngekhadi letyala?
Abathengi be-Bitcoin kwi-Intanethi abamkela amakhadi etyala bayacelwa ukuba baqinisekise ukuba ngubani kunye nomntu ngamnye osebenzisa indawo yakhe. Oku kuqinisekisa ukuba abathengisi bayayithobela imigaqo yokuchasana nemali.
Zeziphi iifizi zedipozithi ekufuneka ndizibhatale xa ndisebenzisa ikhadi lamatyala ukuthenga iBitcoin?
Abanye, kodwa ayingabo bonke, Abarhwebi beBitcoin bahlawulisa umrhumo wedipozithi xa besebenzisa ikhadi lokuthenga ngetyala. Libonakaliswe njengepesenti, oku kubalwa kuthelekiswa nobungakanani bedipozithi yakho.
Ngaba ibhanki yam iya kundivumela ukuba ndisebenzise ikhadi lam letyala ukuthenga iBitcoin?
Kwakukho iingxelo kwasekuqaleni kuka-2018 zokuba inani leebhanki zase-UK azisayi kwamkela idiphozithi zamakhadi etyala xa uthenga i-Bitcoin kwi-intanethi. Nangona kunjalo, awunakuba nangxaki ukuba usebenzisa i-broker elawulwayo, njengoko iqonga ekubhekiswa kulo linokubonelela ngamawaka ezinye iiasethi.
Ngaba ndingarhoxa ndibuyele kwikhadi lam letyala?
Ungayithengisa ngokufutshane iBitcoin ngokusebenzisa i-CFD broker elawulwayo ..